रबिलाई कस्ले फंसायो ? चितवन सांसद: प्रचण्ड, मेयर: प्रचण्डकै छोरी, एसपी: प्रचण्डकै पुर्वअंगरक्षक – PanchKhal Online
Home/समाचार/रबिलाई कस्ले फंसायो ? चितवन सांसद: प्रचण्ड, मेयर: प्रचण्डकै छोरी, एसपी: प्रचण्डकै पुर्वअंगरक्षक
धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, अहिलेका चितवनका एसपी दानबहादुर मल्ल प्रचण्डका पुर्व बडीगार्ड हुन् । त्यतिबेला उनी डीएसपी थिए । प्रचण्डले आफ्नो जनमुक्ति सेना भन्दा बढी विश्वास मल्ललाई गर्दथे । पछि उनले काठमाडौ, दरबारमार्गको प्रहरी बृतमा काम गरे । सोही ठाउँबाट उनलाई पद्दोन्नति समेत मिल्यो र उनी एसपी भए । त्यसपछी उनलाई चितवनमा सरुवा गरियो । प्रचण्डले भरतपुरमा आफ्नी छोरी रेणुलाई मतपत्र च्यातेर मेयरमा जिताउदा रबि लामिछानेले कार्यक्रम “सिधा कुरा जनतासंग” मार्फत सो कुराको चर्को बिरोध गरेका थिए । केही महिना अगाडि मात्र पनि उनले एक प्रसङ्गमा प्रचण्ड मरेपनि केही फरक पर्दैन भन्ने शब्दवाली कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका थिए । उनको त्यो कार्यक्रमपछि प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहालले रबिलाई पागल भनेर फेसबुकमा लेखेकी थिइन । रबिको सो कार्यक्रम पछि धेरै पुर्वमाओबादीका अरिङ्गालहरु रबिबिरुद्द खनिएका थिए ।
उनीहरु रबिलाई कसरी फसाउने भनेर मौका कुरिरहेका थिए । रबिसंग दुस्मनी लिने अर्का मुख्य पात्र हुन्, प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ । श्रेष्ठ पहिले माओबादीको खुब बिरोध गर्थे तर प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षको पद खाली भएपछि सो पद पाउनको लागि दिमाग लगाए । सो पद खाली हुँदा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए । त्यसैले उनले प्रचण्डलाई फकाउन प्रचण्डको छोरा प्रकाश दाहालको अन्तर्बार्ता आफ्नो पत्रिकामा छापे । अनि अध्यक्ष बन्न लबिंग सुरु गरे र बनेरै छाडे । अध्यक्ष भएपछि उनले रबि लामिछाने अमेरिकी पासपोर्ट लिएर नेपाल बसेको कुरा पत्ता लगाए । सो कुरा थाहा पाइसकेपछि उनले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर अध्यागमन बिभागलाई भनि रबि लामिछानेलाई अमेरिका फर्काउन चिठी लेखे । त्यसपछि श्रेष्ठ र रबिको सम्बन्ध बिग्रियो । रबिले सो घटना पछि अमेरिकाको पासपोर्ट त्यागेर नेपाली नागरिकता लिए । र रबिले आफ्नो कार्यक्रम मार्फत किशोर श्रेष्ठको विभिन्न कमजोरीहरुको पर्दाफास गरिदिए ।
किशोर श्रेष्ठले पावरको प्रयोग गरि भिआइपीले पाउने रातो पासपोर्ट लिएका थिए । रबि लामिछानेले त्यस कुराको समेत रिपोर्ट बजाएपछी सरकारले उनको रातो पासपोर्ट खोसिदियो । त्यसपछि किशोर रबि सङ झन् रिसाए । पछि रबिलाई फसाउन बिहेको कुरा ल्याइयो । त्यो कुरालाई पनि रबिले पन्छाए । अहिले शालिकरामको मृत्युको खबरलाई पनि सबैभन्दा पहिले किशोर श्रेष्ठको “जनआस्था” साप्ताहिकले रबि यसको दोशी हुन् भन्दै छापेको थियो । सोहि दिन उनी निकट युटुब च्यानल “नेपाल आज”ले शालिकराम रोएको भिडियो सार्वजनिक गरेको थियो । “नेपाल आज”मै झन्डै एक बर्ष अगाडि श्रेष्ठले रबिलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर २ पटकसम्म लामो अन्तरवार्ता दिएका थिए, तर अन्य कुनै युटुब च्यानलले उनको अन्तरबार्ता लिएका थिएनन् । त्यसैले सो च्यानल उनकै पनि हुन सक्छ । एसपी मल्लले आफुहरुले सो भिडियो सार्वजनिक नगरेको बताएका छन्, त्यसो भए नेपालआजले भिडियो कसरी पायो ?
यो कुराको पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ । अझ यो आत्महत्याको बिषय हुनुभन्दा ४-५ दिन अगाडि उनले निर्मला पन्तको बलात्कार सम्बन्धि कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । सो कार्यक्रममा पत्रकार पनि भनिने र नेता पनि भनिने खेम भण्डारीलाई कार्यक्रममा ल्याएर नाङेझार बनाएर पठाएका दिए । त्यसपछि उनी पनि रबि बिरुद्ध स्पष्ट रुपमा लागेको खेम भन्डारीका पछिल्ला फेसबुक स्ट्याटसमा देख्न सकिन्छ । अहिले यो आत्महत्याको बिषयमा रबिलाई फसाउन कति सजिलो भएको छ, हेर्नुस् ! आत्महत्या भएको ठाउँ चितवन – जहाँ प्रचण्डको छोरी मेयर छिन् । जहाँ प्रचण्डले चुनाब जितेका थिए । जहाँ प्रचण्डका भुतपुर्व सुरक्षा गार्ड प्रहरी प्रमुख छन् । प्रचण्डकै दुईतिहाइ सरकार छ । किशोर श्रेष्ठ प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष छन् । सुदुरपश्चिमका मै हु भन्ने पत्रकार खेम भन्डारी संग रबिको भर्खरै झगडा परेको छ ।